.ကိုဗဈ ကပျရောဂါ ဒုတိယမွောကျနှဈတှငျ ပိုဆိုးလာနိုငျကွောငျး ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့က သတိပေး. – Askstyle
.ကိုဗဈ ကပျရောဂါ ဒုတိယမွောကျနှဈတှငျ ပိုဆိုးလာနိုငျကွောငျး ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့က သတိပေး.
ကိုဗဈ ကပျရောဂါ ဒုတိယမွောကျနှဈတှငျ ပိုဆိုးလာနိုငျကွောငျး ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့က သတိပေး
ကိုဗဈ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ ကူးစကျဖွဈပှားမှု ဒုတိယနှဈဟာ ပထမနှဈထကျ ပိုမိုကွမျးတမျးနိုငျဖှယျရှိကွောငျး၊ အထူးသဖွငျ့ ကူးစကျမှုနျးပိုမွနျတဲ့ မြိုးဗီဇပွောငျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအသဈ ပြံ့နှံ့နတေဲ့ ကမ်ဘာ့မွောကျခွမျးမှာ ပိုကွမျးတမျးနိုငျကွောငျး ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့အစညျးက ဇနျနဝါရီ ၁၃ ရကျနမှေ့ာ ပွောခဲ့ပါတယျ။
“ကြှနျတျောတို့ ကပျရောဂါဖွဈပှားနတေဲ့ ဒုတိယနှဈထဲကို ရောကျနပေါပွီ၊ ဒီနှဈက ကူးစကျပြံ့နှံ့မှု ပိုပွီးတော့တောငျ ကွမျးလာနိုငျပွီး ဒီပွဿနာအခြို့ကို ကြှနျတျောတို့ တှနေ့ရေပါတယျ” လို့ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ရဲ့ အရေးပျေါကိစ်စရပျမြားဆိုငျရာ အကွီးအကဲ ဒေါကျတာမိုကျရိုငျယနျက ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါမှာ ကငျြးပွုလုပျခဲ့တဲ့ အခမျးအနားတဈခုအတှငျး ပွောခဲ့ပါတယျ။
လကျရှိမှာ ကိုဗဈ ကွောငျ့ သဆေုံးသူဦးရေ ၂ သနျးပွညျ့တော့မှာဖွဈပွီး လူဦးရေ ၉၁.၅ သနျးကြျော ကူးစကျခံခဲ့ရပါတယျ။ သီတငျးနှဈပတျကွာ ကူးစကျမှုလြော့ကခြဲ့ပွီးနောကျ ကပျရောဂါကူးစကျဖွဈပှားမှု အခွအေနကေို လလေ့ာသုံးသပျခဲ့ကွပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ကွီးရဲ့ စာရငျးတှအေရ ပွီးခဲ့တဲ့ သီတငျးပတျအတှငျး ကမ်ဘာတဈဝနျး လူဦးရေ ၅ သနျး ကိုဗဈ ကူးစကျခံခဲ့ရကွောငျး သိရပါတယျ။
“ကမ်ဘာ့မွောကျဘကျခွမျး အထူးသဖွငျ့ ဥရောပနဲ့ မွောကျအမရေိကမှာ ရာသီဥတုအေးခွငျး၊ လူတှေ အပွငျသိပျမထှကျခွငျး၊ အခငျြးခငျြး ထိတှမှေု့ပိုမြားလာခွငျးတို့က နိုငျငံအမြားအပွားမှာ ကူးစကျပြံ့နှံ့မှု မွငျ့တကျစခေဲ့ပါတယျ” လို့ မိုကျရိုငျယနျက ပွောပါတယျ။ “အားလပျရကျတှပွေီးတဲ့နောကျ နိုငျငံအခြို့မှာ အခွအေနကေ အရငျတုနျးကထကျ အမြားကွီး ပိုဆိုးလာခဲ့တယျ” လို့ သူကဆိုပါတယျ။
လကျရှိမှာလညျး ဗွိတိနျမှာ ပထမဆုံးတှလေ့ာရတဲ့ ပိုမိုကူးစကျမွနျ မြိုးဗီဇပွောငျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကို စိုးရိမျပူပနျနကွေပါတယျ။ ယခုအခါ ဥရောပတဈလှား အစိုးရမြားက ပိုမိုတငျးကပျြပွီး အခြိနျကာလရှညျကွာတဲ့ ကူးစကျမှုထိနျးခြုပျရေး အစီအမံတှကေို သတျမှတျထုတျပွနျထားပါတယျ။
ကိုဗဈ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ ကူးစကျဖွဈပှားမှု တဈနှဈကြျောလှနျပွီး ဒုတိယနှဈအတှငျး ရောကျရှိလာခြိနျမှာ နိုငျငံအသီးသီးဟာ ကူးစကျမှုထိနျးခြုပျရေးအပွငျ ကာကှယျဆေးထိုးနှံမှုမြား စတငျလုပျဆောငျနိုငျရနျလညျး ကွိုးပမျးနကွေရပါတယျ။
ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါ ဒုတိယမြောက်နှစ်တွင် ပိုဆိုးလာနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က သတိပေး
ကိုဗစ် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှု ဒုတိယနှစ်ဟာ ပထမနှစ်ထက် ပိုမိုကြမ်းတမ်းနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ကူးစက်မှုန်းပိုမြန်တဲ့ မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ် ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ကမ္ဘာ့မြောက်ခြမ်းမှာ ပိုကြမ်းတမ်းနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းက ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဒုတိယနှစ်ထဲကို ရောက်နေပါပြီ၊ ဒီနှစ်က ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု ပိုပြီးတော့တောင် ကြမ်းလာနိုင်ပြီး ဒီပြဿနာအချို့ကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့နေရပါတယ်” လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ ဒေါက်တာမိုက်ရိုင်ယန်က ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ ကျင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အခမ်းအနားတစ်ခုအတွင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ကိုဗစ် ကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ ၂ သန်းပြည့်တော့မှာဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၉၁.၅ သန်းကျော် ကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သီတင်းနှစ်ပတ်ကြာ ကူးစက်မှုလျော့ကျခဲ့ပြီးနောက် ကပ်ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေကို လေ့လာသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ စာရင်းတွေအရ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လူဦးရေ ၅ သန်း ကိုဗစ် ကူးစက်ခံခဲ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။
“ကမ္ဘာ့မြောက်ဘက်ခြမ်း အထူးသဖြင့် ဥရောပနဲ့ မြောက်အမေရိကမှာ ရာသီဥတုအေးခြင်း၊ လူတွေ အပြင်သိပ်မထွက်ခြင်း၊ အချင်းချင်း ထိတွေ့မှုပိုများလာခြင်းတို့က နိုင်ငံအများအပြားမှာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု မြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်” လို့ မိုက်ရိုင်ယန်က ပြောပါတယ်။ “အားလပ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက် နိုင်ငံအချို့မှာ အခြေအနေက အရင်တုန်းကထက် အများကြီး ပိုဆိုးလာခဲ့တယ်” လို့ သူကဆိုပါတယ်။
လက်ရှိမှာလည်း ဗြိတိန်မှာ ပထမဆုံးတွေ့လာရတဲ့ ပိုမိုကူးစက်မြန် မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို စိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။ ယခုအခါ ဥရောပတစ်လွှား အစိုးရများက ပိုမိုတင်းကျပ်ပြီး အချိန်ကာလရှည်ကြာတဲ့ ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေး အစီအမံတွေကို သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ကိုဗစ် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှု တစ်နှစ်ကျော်လွန်ပြီး ဒုတိယနှစ်အတွင်း ရောက်ရှိလာချိန်မှာ နိုင်ငံအသီးသီးဟာ ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးအပြင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုများ စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်လည်း ကြိုးပမ်းနေကြရပါတယ်။